Shandisa Pyridoxal-5-phosphate Monohydrate (41468-25-1) hplc≥98% | AASraw
/ Products / MaR & D Reagents / Pyridoxal-5-phosphate Monohydrate
Rating: SKU: 41468-25-1. Category: MaR & D Reagents
MUTSVENE unobatsira nekugadzira zvigadzirwa kubva ku gramu kusvika pakukura kwePyridoxal-5-phosphate Monohydrate (41468-25-1), pasi pemutemo weCGMP uye nehutsika hwehutano hwehutsika.
Pyridoxal-5-phosphate Monohydrate powder, Vitamin B6 metabolite kuti anoita somunhu coenzyme mu transamination siyana nokuda wezvamatongerwe Schiff-nechimwe linkage nemapoka lysine pamusoro aminotransferase. Uyewo inoshumira se coenzyme mune mamwe maitiro ekugadzirisa uye kuparadzanisa. Inogona kuchinja lysyl uye valy resisi muprotini. Ane kodzero yekudzivisa purinergic receptors uye intracellular influx ya Ca2 +.
Molecular Kurema: 265.16
Makemikari Mazita: Pyridoxal- 5'-phosphate monohydrate, 3-Hydroxy-2-methyl-5 - ([phosphonooxy] methyl) -4-pyridinecarboxaldehyde
Mamwe Mazita: Vitamin B6, Pyridoxal Phosphate, PLP
Vitamini B6 metabolite iyo inoshanda se coenzyme mukuchinja kwekutengesa nekugadzira schiff-base musangano ne lysine mapoka paaminotransferase. Uyewo inoshumira se coenzyme mune mamwe maitiro ekugadzirisa uye kuparadzanisa. Inogona kuchinja lysyl uye valy resisi muprotini. Ane kodzero yekudzivisa purinergic receptors uye intracellular influx ya Ca2 +.
Ndeipi iyo miyo yePyridoxal-5-phosphate Monohydrate
PLP inobatsira pakushandura lysyl uye valy resisies uye mabasa se coenzyme mukuchinja kwekutengesa kuburikidza nekuumba schiff-base musangano ne lysine mapoka pane aminotransferase
PLP ndiyo mafomu anobata mavitamini B6
Uyewo inoshumira se coenzyme mune mamwe maitiro ekugadzirisa uye kuparadzanisa
Iyo Pyridoxal-5-phosphate Monohydrate inoshanda
Pyridoxal phosphate (PLP, pyridoxal 5'-phosphate, P5P), chimiro chinoshanda chevhitamini B6, inonzi coenzyme mune akasiyana enzymatic reaction. Iyo Enzyme Commission yakanyora zvinopfuura 140 zviitiko zvinoenderana nePLP, zvinoenderana ne ~ 4% yezvese zviitiko zvakasarudzika. Kugadzikana kwePLP kunoitika kubva pakukwanisa kwayo kubatana kusunga substrate, uyezve kuita sechinhu chinogadzira electrophilic, nekudaro kudzikamisa mhando dzakasiyana dzecarbionionic reaction intermediates.
Purogiramu inoshanda se coenzyme mumagadziro ose ekuchinja, uye mune zvimwe zvinonzi decarboxylation, deamination, uye recemization reactions ye amino acids. Bhuku re-aldehyde rePPP rinoumba Schiff-based link (mukati mumiririri) pamwe neboka re-ε-amino yekysini imwe ye lysine ye-aminotransferase enzyme. I-a-amino seboka re amino acid substrate rinokonzera boka re-ε-amino renzvimbo inoshandiswa-site lysine muitiro unonzi transaldimination. Izvo zvinokonzera kunze zvinogona kurasikirwa neproton, carbon dioxide, kana amino acid inenge isati yave iyo inonzi quinoid, iyo inogona kuita se nucleophile mune nzira dzakawanda dzinofamba nenzira.
Mukutapudza, mushure mekunyangadza kwemukati we quinoid anogamuchira proton pane imwe nzvimbo kuti ave chekuine. Izvozvo zvinokonzerwa nehydrolysed kuitira kuti boka reamino rirambe richioma. Mukuwedzera, PLP inoshandiswa neaminotransferase (kana transaminases) iyo inoshanda pane zvishuga zvisingawanzo zvakadai sa perosamine uye deosamine. Muzviitiko izvi, PLP inopindirana ne glutamate, iyo inoendesa boka rayo alpha-amino ku PLP kuti iite pyridoxamine phosphate (PMP). PMP inobva yatumira nitrogen yayo kune shuga, ichiita shuga yeamino.
Purogiramu inobatanidzwawo mune zvakasiyana-siyana zvinokonzerwa neBeta-elimination zvakadai sezvinoitwa ne serine dehydratase uye GDP-4-keto-6-deoxymannose-3-dehydratase (ColD).
Iyo inoshandawo mukugadzirisa kugadzirisa mu heme synthesis. Purogiramu inobatanidzwa mukushandurwa kwevavodopa mu dopamine, inobatsira kutendeuka kwechirwere chetachiona chetrotransmitter glutamate kune chirwere chinonzi GABA chekudzivirira, uye inobvumira SAM kuti ive decarboxylated kuti igadzire propylamine, iyo inofanirwa kuparyamines.
Iyi ndiyo inoshandiswa yeVITAMIN B 6 inoshandiswa se coenzyme yekufananidza amino acids, neurotransmitters (serotonin, norepinephrine), sphingolipids, aminolevulinic acid. Penguva yekutengesa kweamino acids, pyridoxal phosphate inotenderedzwa kuva pyridoxamine phosphate (PYRIDOXAMINE).
Pyridoxal Phosphate ndiyo inoshandiswa ne vitamini B6 uye coenzyme yeingi pyridoxal phosphate (PLP) -makemikari ane simba. PLP inobatanidzwa mune dzakawanda zve enzymatic transamination, decarboxylation uye kuparadzanisa kuchinja; zvinotarisirwa kuti pave nehuwandu hweamino acids uye amino acid metabolites, uye yekutangira uye / kana catabolism yevamwe veurotransmitter, kusanganisira kutendeuka kwe glutamate mu gamma-aminobutyric acid (GABA) uye levodopa mu dopamine. PLP inogona kushandiswa sekuwedzera kwezvokudya mumatambudziko e vitamin B6. Kuderedzwa kwezvikamu zvePPP muuropi zvinogona kukonzera kusagadzikana kwehutano.
Pharmacology kubva kuNCIt
Iyi ndiyo fomu inoshanda yevhitamini B6 inoshanda se coenzyme yekubatanidza amino acids, maurotransmitter (serotonin, norepinephrine), sphingolipids, aminolevulinic acid. Munguva yekushandurwa kweamino acids, pyridoxal phosphate inoshandurwa zvishoma nezvishoma kuita pyridoxamine phosphate (pyridoxamine). - Pubchem; Pyridoxal-phosphate (PLP, pyridoxal-5'-phosphate) inogadzirisa maitiro mazhinji enzymatic reaction. Iyo ndiyo fomu inoshanda yevhitamini B6 iyo inosanganisira matatu echisikigo emakemikari, pyridoxal, pyridoxamine uye pyridoxine.
Pyridoxal-5-phosphate Kutengeswa kweMohohydrate
Pyridoxal-5-phosphate Monohydrate ine Mikana Dzakashata
Nzira yekutenga Pyridoxal-5-phosphate Monohydrate kubva kuAASraw